Kilasy virtoaly - Easy Multi Display - Rindrambaiko Digital Signage
Ampiasao ny haitao vaovao hanampiana ny fanamorana ny efitrano fianarana.
NY HOAVIN'NY FIANARANA ONLINE
Manamora fanabeazana virtoaly azo ovaina, azo ifandraisana ary azo idirana.
Fanehoana efijery marobe mora azo ekena izay azo odiana mifanaraka amin'ny filàna fianarana an-tserasera. Mampiasà Easy Multi-Display handefasana hafatra amin'ireo efijeran'ny mpampianatra ho an'ny hetsika mahomby sy fifandraisana eo noho eo. Adinoy ny vaovao very amin'ny tontolo nomerika - Easy Multi-Display dia mamela ny efijery tsirairay ho azo namboarina ary mampiseho fampahalalana mifandraika manokana amin'ny filan'ny mpampianatra sy ny mpianatra.
Raiso an-tsoratra, mifampiresaha, ary diniho amin'ny fotoana tena izy. Ampiasao ny efitrano fianarana virtoaly anao ary lasa mpiara-miasa amin'ny fanavaozana ny indostria! Mifanakaloza hevitra miaraka amin'ny ekipanay momba ny fomba ahafahanao manamboatra endrika Easy Multi-Display hifanaraka amin'ny filàn'ny virtoaly an-dakilasy!
Sintomy ny bokikely kilasy virtoalyMahazoa fidirana eo noho eo
MAFY, MAHAIZA, ary azo ekena
Ireo mpanamora sy mpianatra dia mahazo tombony amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta. Mampiasà Easy Muti-Display handefasana vaovao mora foana, handraisana valin-teny tena izy ary hamoronana resaka mahaliana.
FAMPANDROSOANA FANORENANA TSY AZO ATAO
Mamorona fampisehoana an-tsary marobe izay manokana amin'ny filan'ny efitrano fiankinan-dohanao! Afaka namolavola fampisehoana iray izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa tsirairay izahay.
Mora ny manamboatra
Tsy mila mpampianatra teknolojia ianao vao afaka mihazakazaka amin'ny Easy Multi-Display. Ny interface mora ampiasaina dia mitarika ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fizotran'ny dingana tsirairay, ary manontany anao ny fanontaniana tsara rehetra eny an-dalana.
Mbola nandeha izahay
dokam-barotra izay tsy mbola nahitana hatrizay, izany dia midika fa ireo mpanjifa mety dia voatery voatery naka ny telefaon'izy ireo hamaky ny doka nataonay amin'ny alina. Miaraka amin'ny EMD, manana fampisehoana mavitrika sy doka izay mifanentana amin'ny toerana iainantsika ny maso-maso.
Agenan'ny trano sy tany Ghent ary Bruxelles
Ny EMD dia manana vidiny manohitra ny fifaninanana rehetra! Tena azo ialana ny vidiny ary tsy misy sarany miafina. Ny ekipan'ny EMD dia tena mandray andraikitra ary mandinika izay ilaiko rehetra.
Mampiasa Easy Multi Display hampisehoana ny lalao vaovao misy ao amin'ny Room Room izahay any Grenoble. Ity dia singa manan-danja amin'ny fananganana orinasa miverimberina amin'ireo mpanjifantsika.
Efitra fandosirana, Grenoble
mora ny vahaolana an-dakilasy nomerika miaraka aminay.
Sintomy ny fonosan'ny fampahalalam-baovao an-dakilasy eto aminay! >